Chahokhbili digaag: raashinka sawirada asalka iyo asalka. Sidee loo kariyaa chakhokhbili digaag ee Georgian ah.
Daboolka guriga Cunnooyinka Kuwa kale Cunnada adduunka Bariga
Mucjisooyinka cuntooyinka Georgian: sida loo kariyo chakhokhbili digaag
Chahokhbili waa saxan dhaqameed oo leh cunnada cunnada ee dalka Giriigga ah, taas oo ah fuud laga sameeyay hilibka shimbiraha. Maalmihii hore waxaa laga sameeyey kaliya pheasants, laakiin waqti ka dib ayaa macaanka isbeddelka la sameeyay iyo boorsooyinka ayaa helay in la oggol yahay in lagu bedelo ciyaarta leh shimbir fudud oo ka badan oo la heli karo. Maanta ma aha oo kaliya guriga, laakiin sidoo kale master-chefs diyaariyo chakhokhbili ka soo digaag iyo dhadhanka saxan ma ku xanuunsado.
Chahokhbili oo ka soo jeeda digaaga ee Georgian: qandhada tallaabo tallaabo tallaabo leh
Saxanka, la kariyey sida waafaqsan dhaqanka caadiga ah ee cunnada Georgian, waxaa lagu kala soocay dhadhan fiiqan, gubasho dhajis iyo caruusad, caraf udgoon.
digaag - 1,3 kg
yaanyo - 5 jibaaran
karootada - 2 xabbo
Baasaboorka Bulgaariya - 2 xabbo
red basbaas kulul - 1 pc
basasha - 6 pcs.
khamri cas - 50 ml
toon - 2 madax
qalbi - 1 maqaar
dhir - 1 jir
dhulka basbaaska madow iyo guduud
Hilib doofaar ah googooyaa, ku duub digsi kulul qallalan oo isku shiil ilaa dabacda dahabka ah.
Iyada oo tamaandho ah si ay u saaraan maqaarka, iyo jidhka ku riday on hayso weyn. Karootada, Bulgaariya iyo basbaas qadhaadh jarjar. Ku dar khudradda digaaga, ku shub khamriga, dabool oo iska bixi 15 daqiiqo.
Xabbad basbaasi ku rid oo badbaadi subagga. Salt, xilli oo dhir udgoon iyo isku darka leh digaag iyo khudaarta cagaaran.
Cabbiraad ka aqri dabka ilaa 35 daqiiqo. Ka hor inta aanad damin, ku dar toonta adigoo saxaafadda ku dhex maraya, isku dar ah oo ah basbaaska dhulka kudheer, dhogor-gaduud iyo cagaarka la jarjaray.
Isku day inaad istaagto 10 daqiiqo kadibna u adeegso.
Chahokhbili ka soo digaag: sawir leh sawir
Haddii nafta uusan ahayn cunto aad u baayacmushtari, waxaad ka dhigi kartaa jahwareer digaag ah digaag. Si aad u jilciso dhadhanka, waxa lagu talinayaa in lagu daro qadar yar oo ah labeen dhanaan iyo caano fadhi. Hilibka ku jira qaybtaani waxay dhalaalaysaa boomka, iyo maraqa la helo qoraayad shiidan.
digaag - 1,5 kg
yaanyada - 4 kobcood
Baasaboorka Bulgarian - 1 pc
basal cad - 3 pc
toon - 3 xabo
basil - 1 jir
hops-suneeleli - 1 tbsp
labeen dhanaan - 1 tbsp
Maraqa digaag ayaa loo kala qaybiyaa kabac oo shiil digsi kulul oo qallalan qallalan ilaa 15 daqiiqo. Si joogta ah u soo leexo si aanad u gubin.
Beerka faaruqi brusochkami, yaanyo si biyo ah u karkarin, ka saar maqaarka iyo si yaryar u jilciya hilibka. Khudaarta ayaa isku duuban digaagga, ka dib marka la yareeyo dabka, ku dhaji 15 daqiiqo.
Chop ee basbaas, badbaadi on subagga, ka dibna ku dar hilibka, dabool dabool iyo ka tago in ay dufaan ilaa 30 daqiiqo.
Dhamaadka wakhtiga, ku shub kariimka labeenka ee chahohby, ku dar toonta, ku dhex mari jiray saxaafadda, xilli oo leh dhir udgoon, milix iyo fuud 10 daqiiqo oo kale.
Iska ilaali akhristaha dabka, ku rid baaquli weyn, kula saydhaa caleenta jarjar oo u adeega.
Chahokhbili oo ka yimid digaag leh oo kala duwan, sawir leh sawir
Karinta chahokhbili ee qurxoon waa mid aad u fudud. Waxay qaadataa 1 saac, saxanka diyaarsan diyaarna wuu soo baxayaa oo casiir leh.
digaag - 1 pc
Suugo yaanyo - 600 g
khamri cad - 125 ml
yaanyada - 2 pcs
toon - 4 jeedo
dharka - 2 tsp
miisaanka - 1/2 ee beam
dhir - ½ beam
dhulka basbaas cas
Digaaggu wuxuu u qaybsan yahay qaybo kala duwan, oo lagu dhejiyo baaquli kala duwan, oo wax yar la shiilay.
Khudradda jarjaran, yaanyada iyo basasha, ku dar labeenta subagga hilibka, ku shub khamriga oo kari "Meelo dabin" 15 daqiiqo.
Shub suugo yaanyo, ku dar milix aad u dhadhamiso oo ku dar dhammaan dhirta qoyan. Haddii cufku culus yahay, culeyska biyo karkaraya. Dabool oo isku kari ilaa ilaa nus saac.
Walxaha shredded waxay isku daraan sonkorta jarjaran oo cagaaran. Ku dar digaag iyo khudradda qudaarta oo ku dheji 5 daqiiqo.
Dhammaadka Chahokhbili dhammaatay ayaa caleemo gashan oo ka baxaya 10-15 daqiiqo oo ah meelo kala duwan.
Miiska, u adeega taargo qoto dheer.
Chahokhbili laga bilaabo digaag: macmacaan caadi ah
Isku darka digaaga iyo yaanyo casiir leh wuxuu siinayaa saxanka dhadhan aad u dhalaalaya iyo carafo cusub. Isla markiiba dabka ka hor, hilibka waa in la dubay ilaa 15 daqiiqadood oo aan lahayn saliid iyo dufan kasta oo kale. Iyadoo loo marayo habkan, qaybaha si fiican u ilaali qaabka iyo xajinta xayawaanka xitaa ka dib markaad demineyso.
digaag - 1 kg
yaanyada - 8 pcs
basal cad - 6 pcs
malmac cusub - ½ kg
khamri miis madow - 100 ml
toon - 7 ilkood
basbaaska qashinka ah
basbaaska dhulka madow
Digaag googooyaa oo dabka ku shub dabka yar ee digsiga qallalan ee qalalan ilaa 13-15 daqiiqo. Dhamaadka, milix iyo basbaas.
Ku rid hilib casaan ah digsi, ku shub miisaanka oo dhan oo khamriga ah kuna rid heer kuleyka 10 daqiiqo.
Tamaandho yar si aad u yareyso ilbiriqsiyo yar oo biyo ah kaddibna sii deyn maqaarka. Maqashooyinka jarjar xaleef, u digaaga digaaga iyo xilliga dhirta.
In digsi qaboojiyaha, kuleyl saliid gabbaldayaha iyo baruurta dufanka, ku shub basasha khafiif ah oo la jarjarey, ku rid subagga dusha sare iyo shiil ilaa dahabka. Salt, basbaas iyo u dir digaagga.
In dheriga dhaldhalaalka, dhaji malax, ku shub qadar yar oo biyo ah, dabool dabool iyo si tartiib ah u xiran ilaa jilicsan. Markaas miro diyaarsan ayaa lagu tirtiraa shaandaha jikada, oo lagu daro digaag la dubay oo si wanaagsan u isku qasan.
In digsiga sauté leh chahochbili ku daray jajabiyey, koriye iyo bata. Si fiican u walaaq, isku kari ilaa 5-10 daqiiqo oo ka qaad dabka oo u adeega miiska.
Chahokhbili ka soo digaag leh baradho: cunto la isku qurxiyo
Saxanka, la kariyey baradho, waa ka sii qancin. Intaa waxaa dheer, waxaad u adeegi kartaa saladh iyo khudaarta cusub.
digaag - 1,2 kg
yaanyada - 1 kg
baradhada - 6 pcs.
mashiinka - 1 tbsp
Dhir - 1 tbsp
dhulka basbaaska cas - 1 tsp
Tamaandho waa la karkariyey biyo karkaraya, oo ka baxsan maqaarka oo loo qaybiyo meelo.
Baradho Peel, jarjar xaleef iyo karkariyo biyo yar oo cusbayn leh ilaa badh la kariyey.
Xardhani la jarjarey, ku rid digsi digriiga ah preheated iyo shiil daboolka daboolka 5 daqiiqo. Hilibka waa in uu ahaado dahab iftiin oo midab leh.
Ka dibna cusbo ku dar milix oo sii wad raashinka 10 daqiiqo oo kale dabool furan.
Basasha si yaryar u jarjar oo ku badbaadi saliid gabbaldayaha, ka dibna ku rid weel leh digaag, ku dar subagga iyo dhammaantoodba si aad uhesho 5-7 daqiiqo.
Ku shub yaanyada iyo baradhada, si tartiib ah u walaaq Chahokhbili, dabool 2/3 daboolka iyo kariyo kuleylka hooseeyo saacad nus ilaa 40 daqiiqo. Ka hor inta aanad dabka saarin.
Cuntada Chahobili ee ka timid hilibka
Fiidiyowkaan, khabiir caan ah oo Ruush ah oo Ilya Lazerson u sheegay sida loo kariyo chakhokhbili digaag si sax ah.
Halva ka soo miraha gabbaldayaha
Ak-halva ee Turkiga
Bariis la leh roodhida (ruz maa shaarie)
Alaabooyinka ugu waxtarsan ee caloosha
Raadinta carruurta ee laga bilaabo labo sano jir
Ukunta ukunta ku jirta dusha rootiga
Xarumaha wax iibsiga - qolka carruurta
Maxay shisheeye riyootaa?
Maraq berrigii Bundner
Xoog iyo sharaf leh Natalia Gundareva
Dhibaato xagga jirka ah: khuraafaad ama runtu?
Dhibaatooyinka diyaargarowga cunuga ee iskuulka
Chips, soodhaha iyo cuntooyinka kale ee waxyeellada leh
Island of Sunny: soo jiidashada ugu weyn ee Rhodes
Diidmada xun ee daroogooyinka
Sida loo noolaado ka dib markii la iisoo darsaday qof la jecel yahay
Salad leh xidid celery pickled
Jacayl iyo jinsi - damaanad qaadka farxad
Warbaahinta: Ksenia Borodina iyo Kurban Cumar ayaa ka qaybqaatay
Sida loo nadiifiyo timaha guriga